जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा केको लाज हो ? -
Home मनोरन्जन जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा केको लाज हो...
जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा केको लाज हो ?
१६ बर्षे उमेरकाे पहिलाे अननुभव ! एकपटक अवश्य पढ्नुहाेला….जेठ महिनाको त्यो शनिबार , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यस माथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको थियो । त्यो उधुम गर्र्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन ।
मैले हत्तार उसको हात समातेर आफु तिर तानें म यौटा खु,ट्टा सिधा अगाडी तन्काएर र अर्को खुट्टा तेर्सो पारेर घुंडादेखि केहि खुम्च्याएर बसेकि थिएं । आधा उठिसकेको अवस्थाबाट सम्हालिन नपाउंदै विकाश मेरो काखमा मुख जोतेर लड्यो । उसको तिखो चुच्चो नाक म्याक्सी बाहिरबाटै मेरो यो,नि,को माथ्लो भागमा धस्सिएको मिठो महसुस गरें मैले । सायद उसले पनि पहिलो पल्ट मेरो यौ,व,न,को मादक सुगन्धको अनिभुती गर्यो होला । उसले बिस्तारै टाउको उठाएर भन्यो ( ‘ तिमीलाई त लाज शरम केहि छैन सानी । अब त हामी ठुला ठुला भै सक्यौं त ।
उसले त मलाई चोखो माया साँचो अर्थमा गर्दोरहेछ । मैले पो बुझ्न नसकेको रहेछु उसको मायालाई । त्यसबेला मलाई आफ्नो उत्ताउलोपना देखेर एकैछिनको लागी आफैं संग एकैसाथ लाज र घिन लागेर आयो । मेरा आँखाभरी आँशु भरीए । त्यती धेरै जोश बोकेर विकाश संग या,ैन कृ,डामा लिप्त हुने अभिलाशा बोकेर आएकि मैले विकाश संग माफ माग्न पनि सकिनं । सायद उसले मेरो आँखाले गरिरहेको याचना बुझ्यो होला दुबै हातले मेरो दुबै गालामा भएको केशहरु पन्साउंदै लगेर कान मुन्तिर कसिलो गरेर समाई मेरो ओठमा चु,म्ब,न गर्यो ।
यौटा हातले उसले मेरो घुचुकमा कपालको केश मुठ्याएको थियो भने अर्को हात मेरो यो,नि क्षेत्रतिर डुलाउंदै थियो । यस्तोबेलामा सायद शरिरलाइ दिमागले नियन्त्रणमा रख्न सक्दैन होला मेरो हात विकाशको घुँडासम्म आउने हनुमाने क,ट्टुभित्र पसेर कडा लि,ङ्ग संग खे,ल्न लागे । सानोमा देखेछोएको भएपनि जवानभएपछि कल्पना मात्र गरेको विकाशको लि,ङ्ग मेरो कल्पनामा झैं ल,म्ब,ाई र गोलाईमा थियो । सानोमा उसिनेको सखरखण्डको त्यान्द्रो जस्तो देखिने बिकासको …. अहिले मेरो मुठ्ठीमा अटाई नअटाई थियो । बाँकी अंश अर्को भागमा—– हाम्रा अन्य समाचार पनि पढ्नुहोला….